Kooxda Chelsea oo iska xaadirisay final-ka FA Cup, kaddib markii ay guul ka gaartay Tottenham Hotspur… + SAWIRRO – Gool FM
Kooxda Chelsea oo iska xaadirisay final-ka FA Cup, kaddib markii ay guul ka gaartay Tottenham Hotspur… + SAWIRRO
(London) 22 Abriil 2017 – Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa tiigsatay kama dambaysta koobka Emirates FA Cup, kaddib markii ay 4-2 ku garaacday Tottenham Hotspur, kulankii ka dhacay garoonka Wembley.
Chelsea ayaa goolka la horreysay waxaana shantii daqiiqo ee ugu horreysay bilowgii ciyaarta laad xor ah (Free kick) ugu shubay Spurs laacibka reer Brazil ee Willian.
Tottenham Hotspur ayaa goolka barbaraha ciyaarta la timid waxaana 18’daqiiqo isla qeybtii hore u dhaliyey Harry Kane, kaddib markii uu goolhayaha Blues daba mariyey madax uu isla gaabiyey markii uu dadabka kubbad karoos ahayd ka soo qaaday Christian Eriksen, kulanka ayaana sidaas ku noqday gar isku mid ah 1-1.
Markale kooxda Chelsea ayaa hoggaanka ciyaarta dib ugu soo laabtay inta aan la aadin qeybta nasashada, waxaana rigoore uu Heung-Min Son ku galay Victor Moses gool u bedelay 43’daqiiqo Willian, waxaana uu ahaa goolkiisii labaad ee kulankan, inkastoo rigooradaas lagu tilmaamay mid laciif ah, haddana ciyaarta ayaana lagu kala nastay 2-1 looga gacan sarreeyey Spurs.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Tottenham ayaa markale la timid goolka barbaraha waxaana karoos kale oo uu Christian Eriksen soo qaaday 52’daqiiqo lug ku dhammaystiray da’yarka Dele Alli, kulanka ayaana sidaa ku noqday barbaro 2-2.
Chelsea ayaa markale hoggaanka u qabatay ciyaarta waxaana koorno ay iska saareen xiddigaha Tottenham afka hore ee goolka ka helay 75’daqiiqo Eden Hazard oo bedel ku soo galay ciyaarta kaasoo laad xoog leh oo joog hoose ku socda shabaqa gaarsiiyey kulanka ayaana sidaa ku noqday 3-2 looga gacan sarreeyey Tottenham.
Markale kooxda tababare Antonio Conte ee Blues ayaa gool kale la timid waxaana u dhaliyey 80’daqiiqo Nemanja Matic, kaddib markii baas uu ka helay Hazard uu ka tuuray bannaanka xerada ganaaxa Spurs kubbad awoodeeda lehna dacal ka galiyey goolka Tottenham, kulanka ayaana sidaa ku noqday 4-2 ay ciyaarta ku hoggaaminaysay Chelsea.
Tottenham ayaana awoodi waysay inay gool kale iska soo gudo kulanka ayaana ku dhammaaday 4-2 ay ku adkaatay Chelsea, kooxda Conte ee Blues ayaana iska xaadirisay final-ka FA Cup waxaana ay sugi doontaa midkood kooxaha Arsenal iyo Man City oo berri ciyaari doona.
GOOGOOSKA & SAWIRRADA: Fiorentina vs Inter Milan 5-4 (Viola & Inter oo 9 gool iska dhaliyay)
HORDHAC: AC Milan Vs. Empoli